KANA KAN ISINII ERGE GAMTEESSAA SABAATI!!!!!!!!!!!!!! - Welcome to bilisummaa
KANA KAN ISINII ERGE GAMTEESSAA SABAATI!!!!!!!!!!!!!!
HIN HAMADHU HIN HAMACHIISU
Dureessaa fooqii koree oolaa
Achii gadi ilaaalaa
Hiyyeessa garatu isa goolaa
Dureessi gamoo meeqa ijaaraa
Hiyyeessi kana bira gayuuf hin xaaraa?
Dureessaa butaantaan dhibba lama
Kaalsiin ammo diigdama
Xiqqaa xiqaa ibsutu salphataa
Jajjabaa himuun ni ulfaataa
An kankootuma dubbadhee
Orma yoom isinitti hamadhe
Hamiin anaaf hin barbaachisu!!!!!
Dogongora koon sirreessaa
Hiyyeessaaf hojii banuun barbaachisaa
Muka dhaabuun naannoo koo kunuunsaa!!
Hin hamadhu nanxaara
Akkasitti waa jijjiiraa
Hin fedhu an nama hamachuu
Garuu ammo nama irraa barachuu!!!!!
Jiruu jireenyi sabaa jeeqamee
Malli fooyyeen osoo argamee
Dureessi hedduu muraasaa
Hiyyeessi harka kadhaa raasaa
Jiruun kunoo garagaggaltee
Hedduu hedduu hammacamtee
Mala ikonomii kamtu fooyyessaa filatte?
Gibiraan dureessaarraa kaasuu
Namas gatii gaariin qaxarsiisuu
Qabeenyaa naannoo illee kunuunsuu
Mukoota mimmishaa naannoollee magarsuu
Waa heddutu badaa
Natti himaa gadaa
Gaafadhaa qaallus barbaadaa
Nama heddu hammaatee
Gadaatu nu komatee
Namuu fooyyee osoo hojjatee
Rabbuma guddaa osoo sodaatee!!!!! (2)
Homaa hin qabuu gaarii marxoo
Hoxxeen keessa galuu hoxxee fanxoo
Kan nyaadhu qorsoo
Narratti dhuganii farsoo!!
Namni ganzaba horate
Oduun dharaa maal faaydaa qaba
Namaaf tahaa ganzaba?
An isinitti kolfu jira
Kan baattanii deemtan dhara
Isinumatu itti kasaaraa!!
An dhugatti nan gaddaa
Yoom natti tolee gammadaa
Keessi koo na madaa!!!
Dhara keessan achi qabaa
An Rabbuma qabaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KAN NA SODAACHISU!!
Kan barumsa dhuge na haa ajjeesuu
Maal kuunii kuun kan albee agarsiisu
Maali kuunii kuun koommaandi poostii jedhee kan dhiichisu
Beekkumsi isaanii guddaa garbaa
Maal anis cilfaan qicadhu maal qabaa?
Karaa dheeraa qaxxaamuree isaan bira gayee
Anis beekumsa isaanitiin yoo qulqullaayee
Xurii lafa kaayee!!
Kijiba ol tuulaa
Naannoo isaa guulaa
Maal wonti kun abshaala
Afaaniin haasayuun mirgaa?
Akka fedhanitti natti bananii laagaa?
Hiyyeessi koomaandi postii jedhee uu’uu
Honti kun nurraa haa ka’uu
Hallayyaa haa bu’uu!!!!
Previous Oromo/Ogaden: Authoritarian Government in Ethiopia Risks Triggering Civil War
Next Masrii: magaalaa muummittii biyya Misra Kaayroo keessatti Oromoonn bala ibiddaan du’an